सरकारी जागिरमा नाम निकालेपनि पत्रकारीता रोजेकी को हुन् यी चर्चित पत्रकार ? « नारी खबर >
आश्विन २९, २०७४ आईतबार
संसारमा अनेकखाले मान्छे हुन्छन् । तीमध्ये कति हुन्छन्– जसले दुःखी हुँदै आफ्नो समय कुर्छन् । कति हुन्छन्– जसले चलिरहेको समयबाट आफ्नो अंश खोस्छन् । र, कतिपय हुन्छन्– जसको वरिपरि समय आफैं घुमिरहन्छ । निर्मला शर्माले दुःखी भएर आफ्नो समय कुरिनन् । उनले चलिरहेको समयबाट आफ्नो अंश खोसिन् । र, कहिलेकाहीँ लाग्छ– समय उनको वरिपरि घुमिरहन्छ । आफ्नो जिन्दगीको धार आफैं बदल्न सक्ने त्यस्ता थोरै मानिसहरूमा निर्मलाको नाम कतै न कतै आइरहन्छ । ठूला–ठूला सपना नदेखी तिनै ठूला सपनाको अंग बन्नु सजिलो पनि त छैन ।
सपना नसाँची हुर्किन् निर्मला । बुवा शिक्षक थिए, पढ्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसैले पढिन् निर्मलाले पनि– पोखरामै । एसएलसी दिँदासम्म ठोस लक्ष्य थिएन भविष्यको । एसएलसीपछि विवाह भयो । विवाहले पनि उनको अध्ययनलाई छेकेन । आईएडसम्म निर्मलाले पोखरामै पढिन् । एउटा काँधमा परिवारको जिम्मेवारी, अर्को काँधमा आफ्नो भविष्य । कहिलेकाहीँ सोच्दा पनि अत्यास लागेर आउँथ्यो । तर पनि भविष्यमा केही गर्नु थियो, आफूलाई परिवारले गरेको लगानीको प्रतिफल लिनु थियो । उनी श्रीमान्सँगै काठमाडौंको गाडी चढिन् ।
काठमाडौंमा पनि पढाइले विश्राम लिएन । अंग्रेजी साहित्यमा स्तातकोत्तरसम्म गरिन् । काठमाडौंमा बीए पढ्दा भने उनले भविष्यको गोरेटो खोज्न थालिन् । शिक्षक सेवा आयोग र स्रोतव्यक्तिमा परीक्षा दिइन् । शिक्षकका लागि लिखितमा नाम पनि निस्कियो तर निर्मला अन्तर्वार्ता दिन गइनन् ।
०५० सालमा दिएको परीक्षाको नतिजा ०५२ मा आयो । दुई वर्षमा समयले कोल्टे फेरिसकेको थियो । धेरै पटक बादल फुटेर वर्षा भइसकेको थियो । इच्छा, आकाङ्क्षा फेरिएका थिए । काठमाडौंमा उनका पखेटा लागिसकेका थिए । पत्रकारिता गर्न थालेपछि अरू काम त के काम भन्ने जस्तो लाग्न थालेको थियो । पत्रकारिता भर्खरभर्खर सुरु गरेकी थिइन् । दैनिक नयाँ–नयाँ मान्छेसँगको भेट, प्रबुद्ध वर्गसँगको उठबस अनि पत्रिकामा बाइलाइन । यो पो रहेछ जागिर ! नाम अनि दाम ! उनको गन्तव्य नै परिवर्तन भयो । सरकारी जागिरप्रतिको मोह नै भङ्ग भयो ।
०५२ सालमा ‘कान्तिपुर’ छाडेर गएका तीर्थ कोइरालाको सम्पादनमा ‘श्री सगरमाथा दैनिक’ निस्किने भयो । त्यसका थुप्रै प्रकाशकमध्येका एक थिए– कृष्ण आचार्य । आचार्य नाताले निर्मलाका भिनाजु पर्थे ।
“मलाई उहाँले पत्रिका निस्किँदैछ, ट्राइ गछ्र्यौ भने गर भन्नुभयो,” निर्मलाले सम्झिइन्, “मैले गएर अप्लाई गरेँ । नभन्दै जागिर भयो । त्यहीँबाट हो मैले पत्रकारिता सुरु गरेको ।”
त्यो बेला निर्मलालाई पत्रकारिताभन्दा पनि काठमाडौंमा जागिर चाहिएको थियो । पत्रकारिता उनले पढेकी पनि थिइनन् । त्यसैले उनले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अनुवादमा फर्म भरेकी थिइन् । पछि ‘ट्रेनी जर्नालिस्ट’का रूपमा राखियो । गोपाल खनाल र उनी ‘ट्रेनी जर्नालिस्ट’ भएर ‘श्री सगरमाथा दैनिक’ प्रवेश गरे ।
‘कान्तिपुर’बाट गएका श्याम घिमिरेले उनलाई सडकमा बदाम बेच्ने व्यक्तिको दैनिक आयसम्बन्धी समाचार बनाउन सुझाए । निर्मलाले यही विषयमा समाचार लेखिन् । ‘डे वान’बाट काम सुरु गरेकी निर्मलालाई आफ्नो बाइलाइन पत्रिकामा देख्न भने एक साता कुर्नु पर्‍यो । त्यो दिन उनलाई बादल फाटेर आकाश हाँसेझैं लाग्यो । खुसीको रङ्ग देखेझैं लाग्यो । संसार जित्ने महिला मै हुँ जस्तो लाग्यो । त्यो समाचारमा आएको आफ्नो नाम पटक–पटक हेरिन्, दिनहुुँ । समाचार कटिङ गरेर राखिन् ।
०५२ देखि ०७४ सालसम्म दर्जनौं पटक काठमाडौंमा उनको डेरा सर्‍यो तर त्यो समाचारको कटिङ हराएन । चार वर्षयता भने त्यो कटिङ देखिएको थिएन । केही दिनअघि कोठा मिलाउँदा भेटियो । त्यो कटिङले निर्मलालाई पहिलो दिनको जति नै खुसी दियो ।
पत्रकारिताको श्रीगणेश नै त्यहीँबाट गरेकी निर्मलालाई सुरुमा अग्रजहरूले राजनीतिक समाचारभन्दा पनि सामाजिक विषय खोजी गर्न सुझाए । नाम पनि हुन्छ, समाचार खोज्ने कला पनि उकालो लाग्छ भन्ने सल्लाह उनले शिरोपर गरिन् ।
पत्रिकामा समाचार पढ्न सजिलो हुन्छ । त्यसमाथि टीकाटिप्पणी गर्न समय धेरै लाग्दैन । तर, त्यही समाचार खोज्न भने निकै मेहनत गर्नुपर्छ ।
“बल्लबल्ल समाचार लेख्यो, बाइलाइन नआउने । भोलिको समाचारमा त बाइलाइन आउला कि भनेर मनभरि आशा बोकेर गयो । रातभरि निद्रा लाग्दैन थियो । बल्लबल्ल बिहान हुन्थ्यो तर पत्रिका ढिलो आउने । पुतलीसडक बस्ने म पत्रिका लिन बागबजार नै पुग्थेँ, अफिस । तर, बाइलाइन त के– कति दिन त समाचारै छापिँदैनथ्यो,” निर्मलाले सम्झिइन्, “किन मेरो बाइलाइन आएन भनेर सोध्थें । अलि मेहनत गर भन्थे । आफूलाई भने मेहनत गरेजस्तो लाग्थ्यो । समाचार छ भने त्यो नछापिउन्जेल म अर्को समाचारै लेख्दिनथें । तर, राजनीतिक समाचार छापिएर ठाउँ बाँकी रह्यो भने मात्रै हाम्रो समाचार छापिन्थ्यो ।”
लेखेकै दिन समाचार नछापिने पीडा त थियो नै, त्यसमाथि सामाजिक समाचार जहिल्यै राजनीतिको छायामा परे । त्यसपछि निर्मलालाई ‘बिट’ परिवर्तन गर्न मन लाग्यो । राजनीति र संसद्का समाचार हेर्न मन लाग्यो । सम्पादकले पनि अनुमति दिए । उनले सुरु गरिन्, राजनीतिक दल र संसद्को समाचार खोज्न । एमाले र राप्रपाको संसदीय दलसँगै उनी संसद् भवन पुग्थिन् । मध्यरातसम्म समाचारका लागि पार्टी कार्यालयबाहिर बस्थिन् । मध्यरातमा कार्यालय पुगेर समाचार लेख्थिन् । बल्ल घर जाने समय आउँथ्यो । “तर मलाई घरबाट कहिल्यै पनि असहयोग भएन । किन रातरात बाहिर भन्ने खालका तीखा प्रश्न सुन्नु परेन,” उनले भनिन् ।
हार्डकोर समाचार त जुनसुकै पत्रिकामा आउँथ्यो । फरक भए थोरै एंगलमात्रै । नोटिस हुनै गाह्रो थियो । निर्मलाले खोजी समाचार सुरु गरिन् । कानुनसमेत पढ्दै गरेकी निर्मलालाई अदालती समाचारमा पनि रुचि थियो । एकजना वकिलसँग उनले समाचारको इस्यु मागिन् । उनले भने, “बहुविवाहको समाचार लेख्नुस् ।”
निर्मलाले बहुविवाह गर्ने ‘हेवीवेट’ व्यक्ति खोज्न थालिन् । सूची लामै भयो । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रियसभाका सदस्य र सांसदहरूसम्म बहुविवाह गर्ने भेटिए । लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि सुवासचन्द्र नेम्वाङ, डिल्लीराज खनालसम्मका व्यक्ति थिए, कानुनको धज्जी उडाउने ।
लेख्दै गरेको यो समाचारबारे निर्मलाले सम्पादकलाई समेत भनेकी थिइनन् । सम्पादक तीर्थ कोइरालाले बोलाएर भने, “निर्मला के समाचार लेख्दै छ्यौ ? मलाई वरिष्ठहरूले फोन गरेर हैरान पारिसके ।”
उनले आफ्नो समाचारबारे जानकारी दिइन् । केही दिनपछि उनले समाचार कक्षमा गाइँगुइँ हल्ला सुनिन्, “निर्मलाको समाचार छापिँदैन होला ।” उनले भनिन्, “यो समाचार त जसरी पनि छापिनुपर्छ । नछापी छोड्दिनँ ।”
बहुविवाह गर्ने एक दर्जनको नाम भेटियो । समाचार छाप्नका लागि तयार भयो । उनले समाचार सम्पादकलाई दिइन् । सम्पादक कोइरालाले भने, “बाइलाइन हाल्दिऊँ कि नहाल्दिऊँ ?”
निर्मलाले हाल्दिन भनिन् । कोइरालाले जिस्किँदै भने, “अब निर्मलाकै घरको नम्बर दिनु पर्ला यहाँ फोन गर्नेलाई ।” समाचारको व्यापक चर्चा भयो । कतिले असन्तुष्टि जनाए । पार्टी कार्यालय र संसद्मा भेट हुँदा असन्तुष्टि जनाए । सुवासचन्द्र नेम्वाङ त धेरै वर्षसम्म निर्मलासँग बोलेनन् ।
सुरुमा यस्ता समाचार लेख्न उनलाई डर लाग्थ्यो । धम्क्याउलान् कि भन्ने लागिरहन्थ्यो । तर, जब उनलाई सिनियरहरूले भने, “तपाईंलाई कसैले समाचार लेखेकै भरमा धम्क्याउँछ, ज्यान मार्ने धम्की दिन्छ भने सम्झनुस्– तपाईं सफल पत्रकार बन्नुभयो । काममा सफल बन्नुभयो ।”
त्यसपछि भने उनको आत्मविश्वासको पारोले सगरमाथा नाघ्यो । तथ्यमा बसेर लेख्न कहिल्यै डर लागेन ।
०४७ को संविधान जारी भएर लागू भएको पनि धेरै वर्ष भइसकेको थियो । संसद्ले कानुन पनि त्यहीअनुसार बनाइसकेको थियो । नयाँ संविधानको अभ्यास जनताले गरिरहेका थिए । तर, एउटा कानुन परिमार्जन भएकै रहेनछ । नयाँ संविधानले मृत्युदण्डको कानुन खारेज गरिसकेको थियो । जस्तोसुकै अपराधका भागीदारले पनि मृत्युदण्ड पाउँदैनथ्यो । संविधानले मृत्युदण्डको व्यवस्था खारेज गरे पनि कानुनमा भने यथावत् थियो । त्यो समाचार निर्मलाले लेखेपछि संसद्ले तत्काल संविधानबमोजिम कानुन बनायो ।
संसद्मा कांग्रेसले एमाले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदै थियो । संसद् बैठक लम्बिएर बिहानसम्म बस्यो । समाचारका लागि निर्मला र सुवास देवकोटा ‘असाइन’ भएका थिए । संसद् बैठक सकिएपछि सुवास फुत्त निस्किएर अफिसतिर कुदे । निर्मलाले पर्खिन आग्रह गरिन् । तर, उनको मुखबाट छुरा निस्कियो, “तपाईंलाई पर्खिएर समाचार कसले लेख्छ ?”
बिहान ४ बजेको थियो । अँध्यारो भएकाले उनलाई डर पनि लागिरहेको थियो । निर्मला सुवासको अगाडि लागिन् । अफिस पुगेपछि निर्मलाले भनिन्, “तपाईं घर जानुस्, समाचार म लेख्छु ।”
त्यो बेला रिपोर्टरले समाचार कम्प्युटरमा टाइप गर्ने चलन थिएन । हातैले कागजको पानामा लेख्थे । निर्मलाले पनि त्यसै गरिन् । एउटा हार्ड न्युज र दुई फिचर गरेर निर्मलाले तीनवटा समाचार लेखिन् । समाचार लेखिसक्दा बिहानको ७ बज्यो । त्यो दिन पत्रिका बिहान १० बजे निस्कियो । तीनवटै समाचारमा निर्मलाको संयुक्त बाइलान छापियो । त्यो पनि सुवासको भन्दा उनको नाम अगाडि थियो । दिनभर र रातभरको दौडधुपपछि पनि उनले दुःख गरेर समाचार लेख्नुको कारण पनि त्यही नै थियो– संयुक्त बाइलाइनमा अगाडि आफ्नो नाम आओस् भन्ने ।
केही समयअगाडि निर्मला र सुवासको भेट भयो । निर्मलाले सुवासलाई घर छोडिदिइन् आफ्नै गाडीमा । गाडीमा सुवासले भने, “त्यस दिन मैले तपाईंलाई गरेको व्यवहारप्रति सरी !”
संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार महिला निकै कम थिए । अधिकांश पुरुष पत्रकार हुन्थे । निर्मला रिपोर्टिङ गर्न दिनभरि सँगै बस्थिन् । तर, उनीहरू फुत्तफुत्त बाहिर निस्किन्थे । किन निस्किए, थाहै हुँदैनथ्यो । निर्मला भन्छिन्, “उनीहरू त समाचारका लागि सांसदहरूलाई भेट्न पो जाँदा रहेछन् । किन मलाई नभनेको ? मलाई पनि लानु पर्दैन ? भन्यो भने फलानोले निर्मलालाई सहयोग गर्छ भनेर कुरा काटिहाल्छन् । त्यो सुन्नुभन्दा एक्लै हिँड्यो आनन्द भन्थे ।”
लगानीकर्ताबीच कुरा नमिलेपछि दुई वर्षमा पत्रिका बन्द भयो । उनको पत्रकारिताले पनि कोल्टे फेर्‍यो । प्रिन्ट पत्रकारिता गरिरहेकी निर्मला रेडियो नेपाल पुगिन् । समाचार शाखामा रिपोर्टिङ गर्ने निर्मला पहिलो पत्रकार महिला हुन् ।
उनी रेडियो नेपाल जाँदा सुशील कोइराला समाचार निर्देशक थिए । निर्मलाले ‘भ्वाइस टेस्ट’ दिइन् । सुशीललाई स्वर मन परेन, फेल गरिदिए । तर, पछि उनले ‘आजको अखबार’ नामक बिहानी सेवाको कार्यक्रममा समाचार पढिन् ।
अखबार पढ्दा भने उनले त्यहाँ महिला भएकै कारण विभेदको महसुस गरिन् । “सँगै समाचार पढ्ने एकजना पुरुष साथी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले तपाईंहरू राजनीतिक समाचार रिपोर्टिङ नगर्ने मान्छेले राजनीतिक समाचार पढेको सुहाउँदैन भन्नुभयो । मैले प्रतिवाद गरेँ । हामी सँगै पुनम पौडेल पनि हुनुहुन्थ्यो । पुनमलाई उहाँले राजनीतिक समाचार पढ्न नदिएपछि मैले पुनमलाई भनेँ र पछि पुनमले पनि राजनीतिक समाचार पढ्न थालिन्,” निर्मलाले सुनाइन् ।
रेडियो नेपाल सरकारी रेडियो । राजनीतिक चलखेल बेस्सरी हुने ठाउँ । निर्मलाको राजनीतिक पहुँच पुगेन । सरकार परिवर्तन भएसँगै उनको पनि जागिर गयो । समयको चक्र रोकिएन । ‘सारथि’ साप्ताहिकमा काम गरिरहेकी निर्मला फेरि रेडियो नेपाल पुगिन् । यो पटक भने उनी ‘घटना र विचार’ कार्यक्रममा गइन् ।
एमालेबाट अलग भएको थियो, माले । जिल्लाबाट समाचारहरू आउँथे । वडास्तरीय कार्यक्रममा फलानोसहित ५ सय जना फलानो पार्टीबाट मालेमा प्रवेश… । उनलाई यस्ता समाचारमा विश्वासै लाग्दैनथ्यो । गाउँको जनसङ्ख्याभन्दा धेरै पार्टी प्रवेश गरेको समाचार पढ्न उनलाई मुख लाग्दैनथ्यो । निर्मला भन्छिन्, “मैले त्यस्ता समाचार कहिल्यै पढिनँ ।”
नेपाल सानो, त्यसमा पनि काठमाडौं खाल्डो कचौराजस्तै न हो । यसमा पनि एउटै क्षेत्र, आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि भेट भइहाल्छ । सुशील कोइराला रेडियो नेपाल छाडेर ‘गोरखापत्र’को महाप्रबन्धक भएपछि निर्मलासँग भेट भयो । उनले भने, “यस्तो काम गर्ने मान्छेलाई मैले स्वर परीक्षामा फेल गरेको थिएँ । अन्याय नै गरें नि ।”
त्यो बेला निर्मलामात्रै होइन, धेरै फेल हुन्थे रेडियोको स्वर परीक्षामा । हुन पनि सत्य हो । स्वर नराम्रो मात्रै होइन, विचार, सिद्धान्त नमिल्ने र शक्तिकेन्द्रको ‘एक्सरसाइज’ नगर्नेहरू स्वर राम्रै भए पनि फेल हुने गरेका समाचार बेलाबेला आइरहन्छन् ।
रेडियोमा भर्खर जागिर सुरु भएको थियो । निर्मलालाई काम सिक्नु थियो । दशैंमा घर नगई बस्दा समाचार पढ्न पाइन्छ भनेर उनी घरै गइनन् । पोखरामा त उनी सेलिब्रेटी नै भइसकेकी थिइन्, रेडियोमा बोल्ने मान्छे भनेर । गाउँमा जाँदा मान्छे भेट्न आउँथे । रेडियोमा काम गर्दाको अनुभव सोध्थे । निर्मला गजक्क पर्थिन् । “म घर नगएर दशैंमा रेडियोमै बोलेर बसेँ तर आमा भने म रेडियोमा बोलेको सुनेर रुनुभयो रे,” निर्मलाले विगत साटिन् ।
‘श्री सगरमाथा दैनिक’ बन्द भयो । तर, निर्मलामा पत्रकारिताको भोक मेटिएको थिएन । उनी ‘समाचारपत्र’ दैनिक पुगिन् । अन्तर्वार्तामा सम्पादकले भने, “राजनीतिक समाचारका लागि रातबिरात हिँड्नुपर्छ । तपाईं छोरी मान्छे, कसरी सक्नुहुन्छ ? भोलि विवाह होला, छोराछोरी होलान्, सम्भव हुन्छ ?” निर्मलालाई रिस उठ्यो । भन्दिइन्, “तपाईंले मेरो बाइलाइन हेर्नुभएकै होला । राजनीतिक समाचार नै लेखिरहेको छु । सम्भव भैरहेकै छ त ।”
त्यो बेला निर्मलाको विवाहमात्रै होइन, छोरी पनि जन्मिसकेकी थिइन् । ९ महिनाकी छोरी मामाघर पोखराामा छोडेर समाचार लेखनमा होमिएकी निर्मलाले नर्सरी देखि छोरी होष्टलमा रोखेर मनले इच्छाएको पेशा पत्रकारिता गरिरहेकी थिइन् । निर्मलालाई महिला भएकै कारण त्यस्तो प्रश्न गरियो भन्ने लाग्यो । त्यहाँबाट निस्किँदा उनले बोलाए पनि म यहाँ काम गर्न आउँदिनँ भन्ने मानसिकता बनाइन् । नभन्दै उनलाई फोन आएन ।
“पत्रिकामा काम गर्ने रहर मरेको थिएन, त्यसैले ‘समाचारपत्र’मा आवेदन दिएकी थिएँ । शायद त्यो बेला ‘समाचारपत्र’मा काम गरेकी भए म त्योभन्दा राम्रो अर्को कुनै पत्रिकामा जान्थें होला । शायद कुनै दैनिक पत्रिकाको नेतृत्वमा पनि पुग्थेँ होला,” निर्मलाले आफ्नो उकुसमुकुस पोखिन् ।
‘रेडियो सगरमाथा’मा उनले ४ वर्ष काम गरिन् । यो सामुदायिक रेडियो भएकाले सामाजिक विषयमा मात्रै केन्द्रित थियो । उसले अलि फराकिलो दायरा बनाउन खोजिरहेको थियो । निर्मला गएपछि उनलाई त्यहाँ राजनीतिक रिपोर्टिङको जिम्मा दिइयो । बिहान ५ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म पनि काम गर्थिन् उनी ।
केशव स्थापित मेयर थिए । उनले स्थापितलाई बिहान साढे ७ बजेको कार्यक्रमका लागि बोलाउने निर्णय गरिन् । त्यो समय मोबाइल फोन थिएन । उनले भेटेरै समय तोकिन् । कार्यक्रमको अघिल्लो दिन दिउँसो अफिसमा फोन गरिन् । बिजी हुनुहुन्छ भनेर सहयोगीले फोन दिएनन् । राति पौने १० बजे उनले फोन गरिन् । फोन श्रीमतीले उठाएर ‘मेरो श्रीमान्लाई राति राति फोन गर्ने तपाइँं को आइमाई मान्छे हो ?’ भनेर गाली गरिन् । निर्मलालाई डर लाग्यो । के भन्नु भन्नु भयो । फोन राखिन् । फेरि एकछिनपछि फोन गरिन् । उनले त उसै गरेर गाली गरिन्, “पत्रकार भनेको छ, सधैं राति–राति फोन गरेको छ ।”
निर्मलाले भनिन्, “तपाईंको श्रीमान् महानगरको पिता हुनुहुन्छ । मजस्तो पत्रकार महिलाले मात्रै होइन, महानगरका कुनै पनि महिलाले काम पर्‍यो भने राति १२ बजे पनि फोन गर्न सक्छन् । त्यसका लागि तपाईं र तपाईंका श्रीमान् दुवै तयार हुनुपर्छ ।”
यति भनेर निर्मलाले फोन राखिन् । लहडी स्वभावका केशव कार्यक्रममा आउँछन् कि आउँदैनन्– केही टुङ्गो थिएन । ‘लाइभ’ कार्यक्रम भएकाले उनलाई तनाव भइरहेको थियो । बिहान पत्रपत्रिका पढिसकेर स्टुडियोबाट निस्किँदा त केशव स्थापित आएर गेस्ट रुममा बसिरहेका रहेछन् । निर्मलाले केशवलाई अघिल्लो दिनको कुरा सुनाइन् । उनले भने, “मेरो घरमा यस्तै समस्या छ । तपाईंमात्रै होइन, कार्यकर्ताले फोन गर्दा पनि यो समस्या आइरहन्छ ।”
यस्तै घटना राधाकृष्ण मैनालीसँग पनि भयो । उनी एमालेका नेता थिए । एमालेको बैठक बसेको थियो । अबेर राति भइसकेको थियो । एमालेको समाचार हेर्ने भएकाले निर्मलाले मैनालीको घरमा फोन गरिन् । उनकी श्रीमतीले उठाइन् । ‘महिलाले राति कल गर्ने ?’ भनेर फोनै दिइनन् । पछि पुरुष पत्रकारले फोन गरेपछि उनले श्रीमान्लाई फोन दिइन् र समाचार अपडेट भयो ।
“अफिसमा एकछिन हाँसो नै भयो, यो उमेरका नेताहरूलाई पनि घरमा शङ्का गर्दा रहेछन् भनेर,” निर्मलाले भनिन् । ‘रेडियो सगरमाथा’ छिर्दा सञ्चारिका समूहकी केन्द्रीय सदस्य रहेकी निर्मला चार वर्ष त्यहीँ काम गर्दा सचिव भइसकेकी थिइन् । नेपाल पत्रकार महासंघ गठन भएपिछ खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्य भइन् । महासंघकाे खुलातर्फ लडेर विजयी हुने उनी पहिलो महिला केन्द्रीय सदस्य हुन् । (संघ हुँदा भने अरु पनि महिला केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित भइसकेका थिए ।) अरूको बिदा परेका दिन ‘रेडियो सगरमाथा’ले उनलाई बिदा दिँदैनथ्यो । सबैभन्दा धेरै समाचार स्रोत भएको व्यक्तिलाई रेडियोले अरूको बिदा भएको दिन राख्थ्यो । निर्मला एकातिर विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुँदै जाँदा बैठकहरूमा जानुपर्ने, अर्कोतिर रेडियोले बिदा नदिने । त्यसैले रेडियो छोडिन् । त्यसपछि भने उनले ‘रेडियो कान्तिपुर’ र ‘उज्यालो नेटवर्क’मा एउटा कार्यक्रम चलाइन् । अहिले उनी टेलिभिजन कार्यक्रम ‘समकोण’ चलाउँछिन् । सुरुसुरुमा महिलाका विषयमा के बोल्ने भनेर मुख बटार्नेहरू नै अहिले हामीलाई नबोलाउने ? भन्दै फोन गर्छन् ।
प्रजातन्त्र स्थापनासँगै नेपालमा सञ्चार माध्यमको तीव्र विकास भयो । छापा, रेडियो र टेलिभिजनको सङ्ख्या बढ्यो । अनलाइनको उदय भयो । मिडियाले उद्योगको रूप लियो । तर, सङ्ख्यासँगै गुणात्मक विकास भएन । “सञ्चारिका समूहले पनि अनलाइन चलाइरहेको छ तर अनलाइनका लागि आवश्यक दक्ष महिला पत्रकारहरूको अझै पनि खाँचो छ,” निर्मला भन्छिन्, “बाहिर बसेर समाचार कक्ष समावेशी भएन भन्नु र मान्छे खोज्नुमा धेरै फरक छ ।”
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्षसमेत रहेकी निर्मलाका विचारमा मेहनत गर्ने पत्रकारलाई समाचार कक्षको खाँचो छैन । उनका अनुसार नेपालमा २५ प्रतिशत महिला पत्रकार छन् । सबैभन्दा धेरै रेडियो र टेलिभिजनमा छन् । यसको ६० प्रतिशत २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका छन् । यसको अर्थ विवाहपछि पारिवारिक बाध्यता वा नयाँ अवसरका कारण पेशा छोड्ने प्रवृत्ति बढी छ ।
मेहनत गर्ने पत्रकारको सङ्ख्या निकै कम रहेको बताउने निर्मला अनलाइन मिडियाले समाचार उठान गरे पनि त्यसको गहिराइमा भने नपुग्ने गरेको बताउँछिन् । “लगानी बढ्यो तर क्वालिटी बढेन । पहिले र अहिले उस्तै–उस्तै जस्तो लाग्छ,” निर्मलाले वर्तमान र विगतको समाचारको विश्लेषण गर्दै भनिन् ।